Qareen Mareykan ah oo dhacay hanti Soomaaliya u taallay bangiyada adduunka – Xorriya Online
Qareen Mareykan ah oo dhacay hanti Soomaaliya u taallay bangiyada adduunka
Garyaqaan Mareykan ah ayaa lagu soo oogay dacwado la xiriirta inuu ku kacay qorshe si khiyaano ah loogu dhacay qeyb kamid ah hanti ka badan 12.5 milyan oo doolar oo ay laheyd dowladda Soomaaliya.
Abuukaate Jeremy Schulman oo 45-jir ah, deggana Maryland ayaa lagu oogay in 3.3 milyan uu si sharci darro ah uga qaatay $12.5 Million (Toban iyo Labo Milyan doolar) oo ahayd lacag Soomaaliya ka taallay bangiyada dibedda.
Dembi-oogayaasha Waaxda Caddaaladda Mareykanka waxay sheegeen in laga bilaabo 2009 ilaa 2014, Schulman uu abaabulay shirqool ay kala qeyb-qaateen dad kale, si khiyaano ahna ku heleen hantida maaliyadeed ee magaca Soomaaliya ku taalla bangiyada adduunka oo dhan, qayb ka mid ah hantidan wuxuu u qaatay khidmad iyo kharash ahaan.
Schulman iyo kuwa kale (dad Soomaali ah oo aan la sheegin) ayaa la sheegay inay sameeyeen dukumiintiyo been abuur ah oo ku awood u siinaya qareen Schulman soo celinta hantida maaliyadeed isagoo wakiil ka ah dowladda Soomaaliya. Schulman wuxuu u soo bandhigay dukumiintiyadan been abuurka ah bangiga ay ceymiska federaalka Mareykanku leeyahay iyo hay’ado kale.
Marka laga soo tago adeegsiga dukumiintiyada been abuurka ah, qareen Schulman wuxuu sidoo kale ka qariyay bangiyadaas iyo hay’adaha maaliyadda macluumaadka maadiga ah ee la xiriira awooda uu u leeyahay inuu matalo dowlada Soomaaliya.
Midowga murashaxiinta oo soo dhaweeyay guddiyada Puntland iyo Jubbaland
Dani iyo Madoobe oo ku baaqay shir deg deg ah
Dowladda Federaalka oo ku hanjabtay in ay ka bixi doonto urur goboleedka IGAD
Kenya oo soo dhoweysay warbixinta guddigii IGAD u xil-saartay xuduudaha
Madaxweyne Farmaajo oo wasiirka difaaca Ingiriiska ku qaabilay madaxtooyada qaranka “SAWIRRO”
Diblomaasi beeniyay in ciidanka Uganda dileen 189 dagaalyahan oo Al-Shabaab ah
Mucaaradka oo qoraal ka dhan ah Madaxweyne Farmaajo u diray Beesha Caalamka